IHoroscope yenyanga kaJanuwari-amawele
Kwinqaku elithi "I-horoscope yenyanga kaJanuwari-amawele", siya kukuxelela oko kuza kuba nguJanuwari kwisibonakaliso sezodiac zamamawele. Ukususela ngo-22 ukuya ku-31 kuJanuwari. Usebenza ngokuphandle kubundlelwane, kodwa kuya kuba lula ukufikelela ukuqonda kunye neqabane lakho kule mihla - iingxabano, mhlawumbi intukuthelo inokwenzeka. Kungcono ukuyeka ukucaciswa kwezinto ezibalulekileyo de kube nguJanuwari.
Kwizinto zokuthandana, kufuneka ube yinto engakumbi, kwaye umanyano wakho uya kuba namandla. NgoJanuwari 29, ngokuqinisekileyo hamba ngomhla. Ukususela ngo-1 ukuya ku-10 kuJanuwari. NgoJanuwari 1 no-2 uza kufumana ukuqonda okupheleleyo. Uyakwazi ukuvumelana malunga nento ephambili, ayiyi kuba nemingcipheko yokunxibelelana. NgoJanuwari 4 ebomini bakho obusondeleyo kunokubakho isiganeko esibalulekileyo (kunokwenzeka ukuba oku - ukukhulelwa komntwana). Ukususela ngo-11 ukuya kwe-20 kuJanuwari. Ububambiswano bakho buya kuhambelana ngokubanzi, iimbombo ezibukhali zinyamalale, uvakalelwa kakuhle. NgoJanuwari 16, ngenxa yokungafani kweminqweno, kunokubakho ukulwa kwexesha elifutshane phakathi kwakho, zama ukufumana ingcamango. Ubomi obusondeleyo buya kuba mnandi, buqaqambile kwaye bunzulu. Ukuba ufuna ukuphucula amava akho, ungafunda amaphecana asempuma ngothando, zama ukuqonda ubugcisa be geisha.
Umsizi wenyanga: i-sapphire epholileyo.
Iintsuku ezilungileyo: 25, uJanuwari 28, 7, 13 uJanuwari.
Iintsuku ezinzima: Januwari 27, 2, 10, 18 Januwari.
Imphambili yemfuno: ubudlelwane bezesondo, umngcipheko, iimali ezinkulu, i-mysticism.
Umhla wobuhlanga weewdidi zesaziso zezodiac
Indawo efanelekileyo kakhulu yomhla yiklabhu yetiyi, apho uhlala khona ubude beengalo ukusuka kwelinye kwelinye kwiipayipi ezithambileyo, usela itiye ecocekileyo kwaye uthethe ngokuphakamileyo. Umoya osondeleyo uzaliswa yimifanekiso yesikhumba kunye neentengiso zaseMpumalanga.
Iwele zodidiac zentsapho
Ayikho inkxalabo ekhethekileyo yendlu, ngoko unokutshintsha ingqalelo yakho kwezinye iindawo zobomi. Kodwa ukukhuliswa kwabantwana kufuneka kunikwe ingqalelo enkulu. Udinga umonde omkhulu kunye nokunyamezela, kodwa umphumo uya kukumangalela. Ungalindelanga umphumo osheshayo. Yilungele umsebenzi omde kunye nococekileyo. NgoJanuwari 26, ukuqokelela yonke intsapho, ukupheka isidlo sakusihlwa kwaye udibanise kunye nosapho kwindawo ephumlileyo yentsapho. NgoJanuwari 27 akufanele angene kwingxabano nabazali. Ukuba awuyithandi into, kulungile ukuhlala ucebile. Usuku olukhulu lweemidlalo kunye nokuhlalisana nabantwana - uJanuwari 29. Ixesha emva kokuphela kwelanga ngoJanuwari 4 kulungile kulabo ababandakanyeka ukubhalisa kwamalungelo kwilifa, oko kukuthi ngeli xesha kuya kuba neziganeko ezinqabileyo.
Iimpawu zezodiac zempilo
Okumangalisayo kukuba, unxanelwe kakhulu kunye nokuthatha inxaxheba kwimibango engakhuselekanga ayiyi kubangela ingxaki. Kwiminyaka elishumi yokuqala kaJanuwari, zama ukungaqhathanisi kwaye ungasebenzisi nto ishushu ebandayo. Ubuchule bomzimba wakho buya kubuyiselwa emva kokuba ixesha elide lobugcisa kunye nokuzikhandla komzimba liya kukumangalisa. Isiqhamo samagilebhisi - iimpahla zayo ezincedo ziye zaziwa ixesha elide. Akumangalisi ukuba igama lesiLatini lesi siqhamo lizwakala njengeCitrus paradisi, oku kuthetha "i-citrus yasezulwini". Kwi-100g yeedrafruit iqulethe isiqingatha sempilo yemihla ngemihla ye-vitamin C. Kuya kunceda ukutshisa amafutha kunye nokuzihlaziya ngokugqibeleleyo!
Ukuphumla kwamawele ezandla zomqondiso wezodiac
Ukuba ulungele ukuzizama kwimidlalo embi, qalisa ukwenza. Unokuya kwindawo ye-ski resort, uye kwi-snowboarding, okanye ungaya eLwandle Olubomvu, udibe. Okona kubaluleke - ungesabi, inhlanhla kunye nawe. Ukuhamba kwakhona akuphazamisi, ngoko ke tyelela zonke iindawo ozithandayo! NgoJanuwari 13-15, kungcono ube yedwa kunye nawe, kukho into ocinga ngayo. Kuya kuba mnandi ukuphumla, ulala ebhodini elimnandi kwaye uphumule kakuhle. Xa ukhathele ukuhamba ngezitrato zeqhwa, hlala edeskini uze ubhale iileta kubantu ongazibonanga ixesha elide. Namhlanje kuthanda kakhulu! Kwaye abahlobo abasondeleyo nje bayabiza-kwaye ufumana amandla okomeleza amandla.
Iimali zamanqaku ezidididi zemali
Emsebenzini, yonke into iyaqhelekileyo, ngakumbi kwiintsebenziswano kunye noogxa. Inkqubela phambili kwinqanaba lomsebenzi alilindelekanga, kodwa, kodwa ke, ukutshintsha kwexesha elizayo kunokwenzeka, kwaye iqabane lakho liza kuthatha inxaxheba ebalulekileyo kule nto. Yilumke nje, ungakholelwa ngokungathandabuzekiyo yonke into oyivayo evela kubaphathi bakho, kwaye ngokubaluleke kakhulu, musa ukuthatha yonke into entliziyweni. NgoJanuwari 22, unokukhathazeka ngeengxaki zemali, kodwa ungesabi ukuhlukana nemali. NgoJanuwari 23, cwangcisa ukuthenga kwangaphambili kweeholide. Kwaye emva koJanuwari 4, usenokufuna ukuthatha ithuba kwaye wenze utyalo-mali olude. I-Shampoo esekelwe kwi-oyile yemvelo kunye nemifuno, eya kwenza ukuba izinwele zakho zingenakunyaniseki.
Inqabile yeefadi zezandla zezodiac
I-Mercury iya kukufundisa indlela yokuthetha ngokufanelekileyo iingcinga zakho kwaye uphulaphule iingcamango zabanye. I-Venus iya kunceda ekuphuhliseni umonde nokufumana uxhulumaniso olufanelekileyo. USaturn uya kufakazela: ukuthanda bonke ubudala bayathobela. Ilanga noMarsi banikela umoya wokungahloneli. Uranus uya kuvusa umoya wokuhlaselwa.
Unzima kakhulu ngawe, kodwa phambi koJanuwari, kwimiba ethile, kunokubakho ukungaqondani, zama ukuxhoma ukubaluleka kule nto. Eli xesha lilungile ukuqala ubudlelwane obungunaphakade.
Ngoku kuya kuba lula kakhulu ukudala induduzo, ukunyaniseka, ukupheka ukutya okumnandi kuye, ngoko impilo iya kuba yinto ehle kakhulu, kwaye imvakalelo ihle kakhulu. Yonke imidlalo ye-aesthetic (i-gymnastics, dance dance games, njl.) Zilungile. Eyona nto ibaluleke kakhulu yintliziyo efanelekileyo ngoJanuwari 30-31, oku kuya kunika imali enamandla yonyaka ozayo.
Akufanele alondoloze kakhulu. Ukuba ufuna ukuthatha ithuba - lixesha lokuzama, akunakunceda ukulondoloza ngoku. Ekuqaleni kwenyanga, abameli bezakhono zokudala baya kuziva. Emva kukaJanuwari 4, isigqibo esibalulekileyo malunga nokutyalomali siya kukhula.
Nangona umsebenzi awukhathalanga, kufuneka ukwaneliswe iziphumo. Yaye imeko leyo esebenza ngokubanzi iyamkeleka - kunye noogxa abaqeqeshiweyo. Amaqabane amashishini athembekileyo aya kunceda ukuphucula ishishini ukususela ngoJanuwari.
Ukuthetha nabahlobo kule nyanga kunokwenzeka kwaye kuyimfuneko. Ukuba kwiqela lakhe kukho iindawo ezigqithiseleyo, ngoko banokumthintela ngemidlalo enomdla neyolisayo. Ukususela ngoJanuwari 17, unokuceba uhambo oludibeneyo kunye nomhlobo.
Ngoku lixesha elihle lokuphumla okukhuselekileyo, ngoko ungaqambi ulala embhedeni ngeTV. Ilungele yonke into: ukusuka elula ukuya kwi-ski resort okanye ukudilika kwiilwandle ezifudumeleyo. Kodwa ngoJanuwari 13-15, iGemini yokuthetha ifuna ukuthatha umhlalaphantsi. Ngoku siyazi ukuba i-horoscope iya kuba njani kwinyanga kaJanuwari-amawele.
Isithethe sokuCoca iNdlu
Unyaka we-Tiger, i-horoscope yengonyama
U-Aquarius, umfazi wesine-horoscope ngonyaka ka-2010
I-Horoscope, ngonyaka ozayo weCapricorn
I-Horoscope ngonyaka ozayo ngengonyama
I-Horoscope ngo-2010 ngentlanzi ezalwe ngonyaka we-tiger
Ukuqatshelwa komzimba womzimba: iinkqubo ezinzulu
Umnyaka omtsha waseTshayina 2016: xa uMnyaka weNtshontsho enobuGanga uqala kwaye uphela
I-Alaska pollack kwi-sauce
Imibongo emfutshane yokusebenza kwentsasa ngoMnyaka omtsha kwisikolo sontanga kunye nesiprayimari: iinqununu zamandulo kunye nezimbongi
I-horoscope echanekileyo yeveki ka-Oktobha 16-22, 2017
Ikhekhe lepukkin nele tshokolethi "Ipeyinti yasekwindla"
Ukulungele ukuwa - hlaziya i-wardrobe
Indlela yokuphatha i-adenoids kwintsana?
Indlela yokuqala incoko nomfana kwi-Intanethi
Iikhokhe zeenyosi nge-chocolate icing
Iimpawu eziphathelene neekati
I-caviar ye-eggplant ebusika - zokupheka kunye nesithombe - ngaphandle kokuncipha, iminwe yokukhotha, e-Ukrainian kunye neetatayi, ngaphandle kokucima
Qonda izibonakaliso zomzimba zentlungu